Saka, sei ndiri pano kuti ndikuwane iwe Best Applock ye Android? Icho chakanaka chave chakanaka, kunyange chakanaka kudarika kunyange ini ndichifunga. Iko yako yeIdivaysi yeIndaneti inogona kunge yakaine ruzivo rwakanyanya iwe unogona kunge uchinge uchitarira kunze kwevanhu. Kunyange zvazvo zvigadzirwa zvakawanda zve-android zvinouya nezvayo mukati mekuvhara maitiro, unogona kuwana zvakakosha kuva nehuwandu hwekuchengetedza ruzivo kuchengetedza ruzivo rwega. Usanetseka; downloading Best Applock ye Android zvigadzirwa kubva kuGoogle play store nguva dzose yakachengeteka.
Asi, pane dzimwe nguva zvisingatarisirwi kana zvisingatarisirwi, haugoni kuramba shamwari dzako kana mhuri kuti uwane foni yako. Foni yako inogona kuva nedzimwe ruzivo rwusingadi kuratidza. Kana zvakadaro, Android applock ndiyo ndiyo nzira yakanakisisa. Zvinonyanya kukosha kushandisa a Best applock for android zvishandiso sezvazvinopa humwe huri nani hwehutano nekuchengeteka Nekubatsirwa kwe applocker for android, unogona kuisa kivha pane zvikombiro zvakadai se WhatsApp, Facebook, Skype uye kunyange pane zvinyorwa pafoni yako ye -roid. Saka, kana iwe uchiri kusakosha pamusoro pekuchengetedzwa kwega yega smartphone yako rimwe zuva ungave uri mukurasika kukuru. Tine chokwadi chokuti uri kushandisa password kana kuti pattern pattern pafoni yako ye-android kuitira kuti parege kuva nomunhu anogona kuwana chiguniti kunze kwekuti petavha yekupindwa inopinda.
10 Best Applock ye Android
Kungoitika kana iwe ukasarudza kuti chii chakanyanya simba uye best app lock lock forroid devices kuti uve nechokwadi chekuchengetedzwa kwepa data yako? Zvadaro pasi rakatsanangura runyoro rwekushanda kwakanakisa kwe android kuchakubatsira iwe zvakawanda. Saka, ngatitarise zvikamu zvakadzika zvino.
Uyu ndeumwe wakasununguka uye mumwe wei best applock for android kushandiswa nehuwandu hwe4.6 paGoogle Play Store. Iyo inogona kuvhara chero upi zvawakasungirirwa nePIN code kana iwe unogona kuisa tsika yekunyorera purogiramu yacho. Kungofanana nekombiyuta yakadzivirira purogiramu, inogonawo kudzivirira mafoni anouya neanobuda. Kana foni yako ine kamberi kamera ipapo inongotora chinyorwa chomunhu wacho mushure mokunge 3rd isina kutadza password password. Fake popup skrini kuratidza fake kukanganiswa kwemashoko kunogonawo kubvumidzwa kubva pane imwe sarudzo.
Kuchengetedza ruzivo rwako rwega uye rwekuvhengeteka rakachengeteka ndicho chinangwa chikuru chechitsva ichi, chinoshandiswa chekushandisa chekuchengetedza chinonzi Perfect Applock. Kuwanda kwekudzivirira dambudziko, kuchengetedzwa kwehuviriro, kusununguka kwekushandisa zvikamu zvitatu zvakakurumbira zveizvi best applock for android 2017Kana foni yako isingakwanisiki kana iwe uri munzira, purogiramu yekuvhara maitiro inogonawo kuendeswa mberi chete nokutumira SMS. Unokwanisa kutora applock yakakwana ye android kuburikidza nekubatanidza pasi apa:
Applock Pro ndeimwe yevadzivisi vese vanogona kuchengetedza chigadziro chako uye yega. Iyi applock ichadzivirira ushamwari hwako nekuvhara yako Gallery, Mail, Zvishandiso zvishandise uye chero mamwe maitiro. Ngatitarisei nezvezvinhu zvebasa iro munhu anogona kushandisa nekuda kwekushanda: -
Musoro wepepuru wepurogiramu.
Krisimasi HD Wallpapers yekuvhara screen background.
Simhanya zvakasimba, zvisinganzwisisiki, zvinyoresa maitiro uye zviri nyore kushanda.
Multiple app lock lock theme.
Inopindirana nefoni uye tablet.
Pin pin password uye muenzaniso wekuchengeteka.
Iyo inogona kuvhara mail yako, mapikicha uye kana chero ipi zvayo mamwe maitiro kubva kune shamwari nemhuri nekuisa pini password kana muenzaniso. Iwe unogona kuvhara mitambo uye kudzivirira mwana wako kana vamwe vana kubva kutamba mitambo kana kutenga zvinhu zvisingadiwi. Mifananidzo yako yega yega haichazomboonekwi nevamwe vane chinyorwa ichi. Iwe unogonawo kudzivirira mwana wako kuti arege kutyora zvirongwa zvefoni.
Uyu unouya sechikamu chepakiti yemamwe mapurogiramu (Dodol Collection). Iko kusununguka uye ine misoro yakawanda inokubvumira kuti ushandise nyore nyore kivharo chako. Izvo, zvakadaro, zvichiri kutsigira purogiramu yenguva dzose uye PIN yekuvhara nzira. Icho chisarudzo chakanaka kana iwe uchingoda kuchinja yako lock screen. Iyi purogiramu yakakoshawo kana iwe uchida kuchengetedzwa kwakawedzerwa kwekuvhara mamwe mabasa. Iine mahwindo ehurukuro asi inouyawo nehuwandu hwepakutanga ine humwe hutsika uye hahuna matanho. Iyo inobvumira PIN yevhavha, chiratidzo chekuvhara kana pattern lock. Inogonawo kushandiswa kuvhara Wi-Fi, USB uye Bluetooth connectivity.
MaxLock is awesome applock for rooted Android devices chete. Izvo zvinosuruvarisa asi kana iwe une midzi yeAroid yakadzika, unowana zvimwe zvinhu zvakakura naMaxLock. Izvo sangano iri rakabva paZvijekiti Yakarongeka, naizvozvo iwe pachena unoda kubudiswa pachena panzvimbo yako. MaxLock isiri yakasununguka uye isina-ad-app iyo isina kufanana nevakawanda vekivharidziri kunze uko, inopa utsi nebheteri zvakakosha. Nzira dzekuvhara dzinosanganisira minwe, PIN, pattern uye kugogodza kode. Purogiramu yakasununguka inosanganisira tani yezvakagadzirisa zvingasarudzwa, sangano rekunyengera, Master Switch kuti rikudzivise nyore nyore, kukwanisa kubvisa thumbnail yezvikomborero muwindo rinotyisa, nezvimwewo.
Iyi purogiramu yejeri inouya nepamusoro pekuchengetedza zvinhu zvinokubvumira kuti udzivirire mapurogiramu akaiswa nephasiwedi, pattern lock kana zviratidzo. Iyo inogona kushandiswa kuvhara chero zvipi zvayo zvakasungirirwa zvinosanganisira zvisiri izvo. Chimwe chinonakidza ndechekuti inokwanisa kutora chinyorwa chemukati zvakangoerekana chaitika mushure mekunyora password isina kupinda. Purogiramu yacho inogona kushandiswa kuratidza mhosho yekukanganisa mharidzo pakuzarura mapurojekiti akajekeswa. Zvakare, inogona kushandiswawo kudzivisa mafoni anouya uye anobuda. Izvo zvakakosha zvirongwa zvinokubvumira kuti urege kuvhara zvoga zororo panzvimbo dzakatarwa, kurega kurega Zvirongwa neSMS, Kugadzirisa nguva yakakodzera yevhavha yevharivha nekuvhara kwe3G Data. Zvimwe zvinhu zvaunokwanisa kutsvaga mushure mekuisa pachokushandisa chako.
Chakavanzika Knight, chakagadzirwa neboka reAlibaba, haina kushambadzira uye yemahara maapplock ayo asinganyanyo kufarirwa asi zvirokwazvo anofanirwa kuve. Iyo app inoita kuti iwe uvhare maapplication kuburikidza nenzira dzakasiyana senge PIN / pateni, zvigunwe zvemunwe, kumeso kwekutarisa kana kuburikidza neakavharika kavha kunge kurohwa kwekuvhura, kuzunza, kana meseji yekudonha. Pamwe pamwe nemaapp, iwe unogona kuvharira inouya mafoni neyakavanzika Knight. Pane zvasarudzo zvekudzivirira kubviswa kweapp, viga chiziviso chekutarisa kubva kune maapps akaita seWhatsApp nemusuwo wepachivande wekuhwandisa iyo app seyekutengesa. Pamwe chete neizvozvo, iyo app inotora mifananidzo yevanopinda vanopinda isiriyo password. Iyo app zvakare inosanganisira mamwe maficha senge mafoto & mavhidhiyo vault, kugona kutarisa kwega zvakavanzika nyaya uye kujekesa browser nhoroondo.
Verenga zvakare: - Nzira Yokugonesa Iko Kutevedza, Kvhavha Kwepini KANA KUTI KUTI KUTI KUTI KUTI KUSUNGWA KUSI KUTI KUTI KUTI KUTI KUTI KUTI KUTI KUTI KUTI KUTI KUTI KUTI KUTI KUTI KUTI KUTI KUTI KUTI KUTI
Iyi purogiramu inokupa zvisarudzo zvakawanda zvekuvhara kusanganisira classic slide kuti uzarure uye shandura kuti uzarure nzira. Izvo zvinouyawo nehope yekunatsa kubvisa nzira iyo inokubvumira kuti uise munwe wako kuburikidza ne bubble kuti uzarure foni. Izvo zvachose kusununguka kushandisa uye hazvidi kuti zvimwe zviwedzere mukati-app kutenga zvigone kushanda. Iyo iri nyore purogiramu ine basa shoma kune avo vasingatarisiri chero chinhu chakaoma zvikuru. Iyi iyi imwe purogiramu yepachena iyo inoita zvinopfuura kungovhara skrini yako.
Inoshandisa dhidhiro pafoni yako yakadai seG GPS kuona kana uri pamba kana ehofisi uye wobva wafungidzira zvidzidzo zvaunoda panguva iyoyo. Iinewo mamwe maitiro akadai sehutano hunoita kuti uzarure zvimwe zvibatsiro apo chhivhene ichi chichivharidzirwa pamwe nemasarudzo akachenjera.
Verenga zvakare: - 5 Best Free Lock Screen Apps ye Android 2017
Kana iwe uchida kuchengetedza maitiro ehurongwa iwe unogona kushandisa Smart Applock. The yakanakisa Applock yemhare mbozha ichawedzera hovha pane system apps seBluetooth, Broadband, uye kunyange kuparidzira foni. Iyi ndiyo yakakosheswa uye yakanakisisa yekuchengetedzwa kwekushandisa kwekifaa chako cheAndroid. Iri purogiramu rinoshanda zvakanakisisa kuti rivanze mapepa ega uye mavhidhiyo. Hapanazve chikonzero chokuzvidya mwoyo pamusoro pehuga. Mifananidzo nemavhidhiyo aunowedzera mu Photo muvharo neVhidhiyo chivako zvichave zvakachengetedzwa uye munhu anogona kungovawana chete nekupa iyo yakakodzera password. Saizvozvowo, iwe unogona kuisa kivha pane chero chikumbiro chinowanikwa pafoni yako inosanganisira Facebook, Gmail, WhatsApp, Google Play Store, nemitambo nezvimwe. Mharidzo, Mahofisi nePaneti yezvirongwa zvinogonawo kuchengetedzwa kwephasiwedi uchishandisa purogiramu iyi yejw.org.
Izvo app inoenderera mberi ichimhanya kumashure uye inotanga kutanga mushure mekunge uchitangazve foni yako. Kubva pazvirongwa zvepaneti yemashandisirwo, unogona nyore nyore kugadzirisa Purogiramu yeIndaneti yezvibvumirano, tarisa mapurogiramu aunoda kuvhara nekuita.
Ichi chinhu chiduku chekushanda chinonyatsokwanisa kuita basa rayo rekutanga rekuvhara chero mhando yeAndroid mukati memasekondi. Inoshanda zvakanaka pamusana pevhangeri re Facebook yako, WhatsApp, Viber nezvimwewo kuitira kuti password idzivirire faira yako. Hexlock App Lock Ndiyo yakanaka chaizvo iyo mapurogi ekushandisa eItrams akawana zvakawanda zvekutengesa pamusana pehutano hwakanaka uye zvinhu zvakanakisisa. Ikokuta inokuita kuti uvhare mapurogramu kuburikidza neminwe yeminwe, nePIN uye purogiramu sekuchengetedza kwako. Gadzira password yakasiyana-siyana kana muenzaniso wezvibvumirano uye ita kuti purogiramu yako yega yega / data yakachengeteke.
Sangano rekuvhara ruzivo runobatsira kuchengeteka kwakanyanya kwekushanda kunodzivirira iyo purogiramu kubva pakusunungurwa kana kuurawa. Inogonawo kudzivisa kusungirwa nekuregererwa kwemapurogiramu kubva pane yako kifaa pasina mvumo uye iyo inowedzera kumwe kuchengeteka. Kune zvirevo zvakasiyana-siyana zvakagadzirirwa seSebasa, Musha, Sangano, Vabereki, Chikoro nezvimwe asi iwe unogona kuchinja izvi kana kuumba yako pachake mapeji. Hexlock inokubvumira kuti zvive nyore kupa purogiramu yakavakirwa paNet-Wi-Fi network yako inoshandiswa.
Zvirongwa Lock & Garari Hider
Wedzera kukiya kune ese maapplication akaiswa pane yako nhare mbozha uyezve chengetedza ese mapikicha mune yako gallery akachengeteka neApplication kukiya & gallery hider. Iwe unowana akawanda anoshamisa maficha mune ino yakanakisa app kukiya yeiyo 2017 XNUMX. Kubva pane sarudzo pani, iwe unogona kuseta yetsika chengetedzo mubvunzo kuburikidza iyo iwe yaunogona kugadzirisa pasiwedhi kana iwe ukakanganwa nezvayo. Zvirongwa Lock & Garari Hider ndeye yemahara kunyorera uye iwe unogona kuikanda kubva kuGoogle Play Store neiyi iripazasi yekubatanidza.
Iwe unogona kuwana purogiramu yekombiji ye-android free download kubva kuGoogle Play. Iwe unogonawo kuwedzera hovha kune inouya inoshamiswa neyo app.
Ichi chinhu chimwe chekushanda chinoshanda chinouya nemitemo yemhando yekuvhara maitiro ie, Password Protection uye Pattern Locking. Unogona kuishandisa kuti uvhare mapepa ega ega pafoni yako ye -roid. A widget inogona kuiswa pachikona chemukati kuitira kuve nekugonesa / kubvisa kushandiswa kwekushanda.
Shamba yeGoogle Play ine mamiriyoni eUkushandisa Mahara uye Okubhadhara uye zviuru zvezvitsva zviri kuwedzerwawo zuva nezuva. Kunze kweMamiriyoni e-android applications, pane zvimwe izvo munhu wose aifanira kuva nazvo kana kuti zvichida anoedza. Ndinotenda izvi 10 Best Free AppLock ye Android iri kukubatsira iwe kugomera kwekusununguka kunyange panguva iyo, apo hanzvadzi yako duku iri kuedza zvimwe zvinhu zvakanyanyisa. Regai ndive neshoko pane iri, taura iwe pane izvozvo. Bhokisi rebhokisi iri pasi apa.
Filed Under: Yakachengeteka Applock Master
Kutanga zvinhu zvisere zvekuita pane yako nyowani Samsung Galaxy Watch 8